Archives tag: playstation
Dom » Entina notsongaina tamin'ny "playstation"
Ny mpanara-maso PlayStation VR vaovao sy feno teknolojia
Tamin'ny volana lasa teo, nanambara tamin'ny fomba ofisialy i Sony fa nanomboka niasa tamin'ny andiany solomaso VR vaovao izy, izay, miaraka amin'ny PlayStation 5, dia miantoka fiantohana tsy hay hadinoina. Ny zava-misy virtoaly an'ny PlayStation dia hiditra tanteraka ...
Ny olana momba ny fahatsiarovana ao amin'ny Playstation 5 raikitra!
vaovao, PlayStation, ps5, Sony
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny console Playstation 5 dia voavaha ihany tamin'ny farany. Ahoana no nataon'i Sony tamin'ny fahatsiarovana kely? Mahagaga ny famatrarana raha vao manomboka, ny famelana ireo mpampiasa tsy misy fahatsiarovan-tena 667GB fotsiny dia vahaolana ratsy, maro amin'izy ireo ...